မင်းကွန်း၌ နယ်ကျွံ ဝင်လာသည့် သမင်အထီး တစ်ကောင်ကို လူဝိုင်းလိုက်သဖြင့် မြစ်ထဲထွက်ပြေးရာမှ ? - Yangon Media Group
စစ်ကိုင်း၊ ဇန်နဝါရီ ၁၅
မင်းကွန်း တောင်ရိုး တောင်များပေါ်တွင် နေထိုင်ကျက်စားသည့် သမင်အထီးတစ်ကောင်မှာ ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက် နံနက် ၉ နာရီခန့်က မင်းကွန်းမြသိန်းတန်ဘုရားကြီး မြောက်ဘက်လမ်းအတိုင်း ရှားရောင်းရွာ၊ မေဃဝန်ကျောင်းထဲရောက်ရှိလာပြီး ဒေသခံများက ဝိုင်းလိုက်ကြရာမှ ဧရာဝတီမြစ်အတွင်း ဆင်းပြေးစဉ် မြစ်အတွင်း အမောဆို့ရေမွန်းသေဆုံးသွားမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါ သမင်မှာအမြင့်သုံးပေခန့်ရှိ သမင်အထီးကြီးဖြစ်ပြီး သမင်မှာ မေဃဝန်ကျောင်းထဲဝင်ရောက်ပြီး လူများပြေးလိုက်ကြရာမှ သမင်မှာထွက်ပေါက်ရှာ၍ အရှေ့ဘက်ရှိဧရာဝတီမြစ်သဲသောင်ပြင်အတွင်း ဆင်းပြေးစဉ်ဒေသခံအချို့မှ သမင်၏ ဦးချိုကိုကိုင်ကာဖမ်းဆီးစဉ် သမင်မှာရုန်းကန်ရာမှ ရေမွန်း သေဆုံးသွားခြင်းဖြစ်သည်။ ”ကျွန်တော်သိတဲ့အချိန်လိုက် ကြည့်တော့ မင်းကွန်းသစ်တောအရာရှိက မသတ်ကြနဲ့၊ မသတ်ကြနဲ့လို့အော်ပြီးတားသေးတယ်။ လူတွေက တုတ်၊ ဓားနဲ့ ရိုက်သတ်တာ တော့ မဟုတ်ဘူး။ သမင်ကကြောက်တာရော၊ မောနေတာရော ရေထဲ ရောက်နေတာပါဖြစ်နေတော့ ရေထဲခေါင်းမြုပ်မွန်းကျပ်သေသွားတာပါ။ သမင်အသေကို သစ်တောအရာရှိက မီးရှို့ခိုင်းတယ်။ မင်းကွန်းမှာမနှစ်က မျက်စိလည်နယ်လွန်လာတဲ့ မင်းကွန်းတောင်ရိုးက သမင်နှစ်ကောင်သေခဲ့ပြီးပြီ” ဟု မင်းကွန်း မြောက်ရွာမှ ပန်းချီဆရာကိုစုက ပြောကြားသည်။
မင်းကွန်းအနီးတွင် ယခင်နှစ်က ဓမ္မနာဒကျောင်းတိုက်ဝန်းကျင်၌ သမင်တစ်ကောင်နှင့် ရေဆာသဖြင့် နယ်ကျွံလာသည့်သမင်တစ် ကောင်သေဆုံးခဲ့ပြီး ယနေ့တွင် မျက်စိလည်နယ်လွန်လာသည့် သမင်တစ်ကောင်ထပ်မံသေဆုံးသွားသဖြင့် ယခုအခါမင်းကွန်း၌ သမင်သုံးကောင် သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
အထောက်အပံ့ နည်းပါးသည့် စာသင်ကျောင်းများကို ရေးမြို့မိသားစု ပရဟိတအဖွဲ့ ကူညီပံ့ပိုးသွားမည??
ဈေးကစားသူများကို ဖော်ထုတ် အရေးယူမည်ဟု အစိုးရပြောကြားပြီးနောက်ကန်ဒေါ်လာဈေး ပြန်ကျ
နိုင်ငံရေးတွင် သက်ဆင် ဝင်ရောက် စွက်ဖက်နေမှုကို စုံစမ်းပေးရန် ထိုင်း ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် တောင??